Bago Region Supreme Court - တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားစီရင်ရေးသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရပ်အနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့မှ သီးခြားရပ်တည်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များနှင့် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများသို့ ခွဲဝေအပ်နှင်းထားပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေတို့အရ အောက်ဖော်ပြပါ တရားရုံးများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
* တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
* ခရိုင်တရားရုံး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် ဒေသတရားရုံး
* ခရိုင်တရားရုံးများ (၄) ရုံး
* မြို့နယ်တရားရုံးများ (၂၈) ရုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် တရားသူကြီးချုပ် (၁) ဦးနှင့် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး (၃) ဦးမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
တရားမနှင့် ရာဇဝတ်မှု(၂) မျိုးလုံး၏ မူလမှုများကိုကြားနာခွင့်ရှိပြီး၊ လက်အောက်ခံတရားရုံးများကချမှတ်သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီနှင့် အမိန့်များအပေါ် အယူခံနှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများရှိပါသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှိ အမှုအားလုံးကို တရားသူကြီးတစ်ဦး သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက တစ်ဦးထက်ပိုသော တရားသူကြီးများဖြင့် စစ်ဆေးပါသည်။ တရားလွှတ်တော်သည် လက်အောက်ခံတရားရုံးအားလုံး၏ တရားစီရင်ရေးတာဝန်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များအပေါ် စီမံအုပ်ချုပ်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် တရားစီရင်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို တိုင်းဒေသကြီး တရားရေးဦးစီးမှူးရုံးမှ လည်းကောင်း၊ တရားသူကြီးချုပ်ရုံးမှလည်းကောင်း ကူညီထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အထောက်အကူပြုရန် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအဖွဲ့မှူး၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိပါသည်။
ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(၇၀) ကြိမ်မြောက် ကထိန်လျာသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား
သီတင်းကျွတ်ကာလ ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း
သီတင်းကျွတ်ကာလ ဂါရဝပြုကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၂၁) ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနား
Copyright © 2021 High Court of Bago Region. All Rights Reserved.
Email : bago.hc@mptmail.net.mm
Last Updated: 1 September' 2021